प्रेमको दर्दनाक कथा – छोरीसँग प्रेम गर्ने किशोरको लिंग काटियो, आँखा फुटाइयो…. -
प्रेमको दर्दनाक कथा – छोरीसँग प्रेम गर्ने किशोरको लिंग काटियो, आँखा फुटाइयो….
पाकिस्तानमा एक बाबुले आफ्नी छोरीसँग प्रेम गरेको आरोपमा एक किशोरको लिंग काटिदिएका छन्। स्थानीय १५ वर्षीय ती किशोरको लिंग काटिदिनुका साथै उनले आँखासमेत फुटाइदिएका छन् । ती किशोर उनकी छोरीसँग प्रेम सम्बन्धमा थिए।
लाहोरमा भएको सो घटनाका पीडितको उपचार स्थानीय अस्पतालमा जारी छ । ती किशोरका परिवारका अनुसार केटीका बाबु तीनजनासँग आएर उनका छोरालाई पिटी अपहरण गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो छोरालाई रावी नदीछेउ लगेर कुटपिट गरेका थिए।
‘उनीहरूले मेरो छोराको लिंंग काटिदिए, आँखा फोडिदिए,’ पीडित किशोरका बाबुले भने। घटनालगत्तै सबै आरोपी फरार भएका थिए । उनलाई एक स्थानीयले उद्धार गरी अस्पतालमा भर्ना गराएका थिए। घाइते युवकले प्रहरी समक्ष आफ्नो उजुरी दर्ता गरेका छन् । पीडितको बयानका आधारमा प्रहरीले सबै आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ।newznepal.com
Wed-May-2018, 01:48 am मा प्रकाशित, 294 जनाले हेर्नुभयो
कमल खत्रीले ‘जाउला रेलैमा’ गीत गाउँदा केटीहरुको यस्तो रुवाबासी हेर्नुहोस पुरा भिडियो